Raiisel wasaaraha Sudan ayaa ka badbaaday isku day dil | Banaadir Times
HomeUncategorisedRaiisel wasaaraha Sudan ayaa ka badbaaday isku day dil
Khartoum – Raiisel wasaaraha Suudaan ayaa ka badbaaday isku day dil ka dib markii uu qarax ka dhacay meel u dhaw kolonyo uu ku sugnaa caasimada Khartoum, warbaahinta dowlada Sudan ayaa sidaa sheegay.
Qoyska Abdalla Hamdok ayaa xaqiijiyay inuu badqabay qaraxa kadib. Telefishanka dawladda Sudan ayaa sheegay in Hamdok uu ku sii jeeday xafiiskiisa markii uu qaraxu dhacay, isla markaana loo qaaday “meel aamin ah.”
Ma jirto cid markiiba sheegatay mas’uuliyadda weerarka.
Muuqaal la soo galiyay khadka internetka ayaa muujinaya laba baabuur oo kuwa Jabaan-ka sameysan oo loo yaqaan ‘SUVs’ oo ay adeegsadaan saraakiisha sarsare ee Suudaan oo wadada la dhigay, oo ay waxyeelo ka soo gaartay carmallada. Gaari kale ayaa si xun ugu dhaawacmay qaraxa.
Hamdok ayaa loo magacaabay ra’iisul wasaare bishii hore bishi Agoosto, kadib markii mudaaharaadyo dimuqraadiyadeed lagu taageeray millatariga in uu meesha ka saaro madaxweynaha isbahaysiga Cumar Al-Bashiir bishii Abriil uuna ku badalo xukuumad uu hogaamiyo shacabka.
Wadaxaajoodyo bilo ka dib, millatariga iyo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda taageera ayaa gaadhay heshiis awood-wadaag bishii Agoosto. Heshiiska ayaa aasaasay gole militari-rayid ah oo isku dhaf ah, 11 xubnood oo gole madax-bannaan oo xukuma Suudaan saddexda sano ee soo socota.
Jeneraalada militariga ayaa wali ah kuwa hogaamiyaasha dalka waxayna muujiyeen rabitaan yar oo ah inay awooda ku wareejiyaan maamulka ay hogaaminayaan shacabka.
Al-Bashiir wuxuu xukunka la wareegay afgambi militari oo Islaami ah 1989 wuxuuna ku soo rogay fasiraad adag diintiisa muwaadiniintiisa, xaddidaya xorriyadda shaqsiyadeed. Waddanku wuxuu ahaa mid caalim ah oo caalami ah oo lagu taageerayo Islaamiyiinta xag-jirka ah.
Hamdok wuxuu kaloo cadeeyay in dawladu ay la shaqeyn doonto dadaalka maxkamada caalamiga ah ee dambiyada si ay u maxkamadeyso kuwa la doonayay dambiyo dagaal iyo xasuuq la xiriira colaada Darfur ee Suudaan sanadihii 2000.
Mas’uuliyiinta ku-meel-gaarka ah waxay bishii Febraayo ku dhawaaqeen inay oggolaadeen in al-Bashiir loo dhiibo ICC iyadoo ay weheliyaan mas’uuliyiin kale oo hore ay doonaysay ICC.
Dowladda ku meelgaarka ah ee Suudaan waxaa saaran cadaadis si ay u soo afjarto dagaallada ay la gasho kooxaha fallaagada iyadoo raadineysa inay dayactir ku sameyso dhaqaalaha dalku ku burburay, soo jiidashada gargaarka shisheeye ee aadka loogu baahan yahay ayna gaarsiiso dimuqraadiyadda ay ballan qaaday.
Ku dhawaad ​​hal sano kadib markii xukunka laga tuuray al-Bashiir, dalka waxaa soo food saartay dhibaato dhaqaale oo aad u daran. Sicir bararku wuxuu taagan yahay 60% halka heerka shaqo la aanta uu ahaa 22.1% sanadka 2019, sida laga soo xigtay Sanduuqa Lacagta Adduunka. Dowladda ayaa sheegtay in 30% dhalinyarada reer Suudaan, oo ka badan kala bar dadka 42 milyan ka badan ay yihiin shaqo la’aan.
Previous articleWafdi ka socda Dowladda oo gaarey degmada Baraawe
Next articleXuutiyiinta Yemen oo Eedeyn & digniin u jeediyey DFS